နည်းပညာ | asnthanhan's Blog
USB ကိုအသုံးပြုပြီး ၀င်းဒိုးအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်၍ရသောဆော့ဝဲ
Posted by asnthanhan under နည်းပညာ
USB ကိုအသုံးပြုပြီး ၀င်းဒိုးအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်၍ရသောဆော့ဝဲ(လျှို့ဝှတ် စကားဝှတ်တွေကိုထိုးဖောက်၍)
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတွေ မကြာခဏ လျှို့ဝှတ်စကားဝှတ်တွေမေ့တတ်သောကြောင့် ဒီဆော့ဝဲလေးကိုသုံး ကြည့်လိုက်ပါ၊ အဆင်ပြေပါလိုက်မယ်…
KonBoot v 1.1 32 & 64 bit
Kon Boot ဟာ USB flask drive,CD-ROM or Floppy diskette တွေကိုအသုံးပြုပြီး ၀င်းဒိုးရဲ့လျှို့ဝှတ် စကားဝှတ်တွေကိုဖြတ်ကျော်၍ ၀င်းဒိုးအားလုံးကိုဝင်လို့ရတဲ့ ဆော့ဝဲလေးဘဲ၊
အသုံးပြုနည်းကတော့ ဘာမှခက်ပါဘူး ရိုးရိုးလေးပါ၊
ပထမဦးဆုံး သင့်ရဲ့ CD, USB Flash or Floppy disk တွေကို သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာတွေနှင့် ချိ်တ်ဆက်လိုက်ရုံပါဘဲ
ဘာလျှို့ဝှတ် စကားဝှတ်တွေမလိုဘဲ ၀င်းဒိုးကိုဖြတ်ကျော်၍ Kon Boot က ၀င်းဒိုးကိုအနားပေး လုပ်ပေးပါလိုက်မယ်၊
ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတွေ မကြာခဏ လျှို့ဝှတ်စကားဝှတ်တွေမေ့တတ်သောကြောင့် ဒီဆော့ဝဲဟာ မူင်းဖိုင်တွေ ဘာမှဒုက္ခမပေးပါဘဲ ကျွှမ်းသူတွေရော မကျွှမ်းကျင်သူတွေပါ အသုံးပြုလို့ရပါတယ်၊
Method: Download Link– ဒီ၀၀်ဆိုဒ်က free 10GBထိဒေါင်းလိုပ်လို့ရပါတယ်
Posted by asnthanhan under နည်းပညာ, အထူးသတင်း
သတင်းအစုံပါသော အွန်လိုင်းမြန်မာ၀၀်ဆိုဒ် !
နာမည်ကြီးမြန်မာ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ Website တွေရဲ့သတင်း၊ ဆောင်းပါးတွေတော်တော်များကို တင်ထား သော myanmar online website လေးဘဲ၊ တော်တော်စုံပါတယ်၊ ၀င်ပြီးဖတ်ကြည့် သင့်တဲ့ Website ဖြစ်လို့လမ်းညွှန်ပါတယ်!
rare earth ခေါ် မရှိမဖြစ် ရှားပါးသတ္တုများ အရေးကြီးပုံ
Posted by asnthanhan under စီးပွားရေး, နည်းပညာ, သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
Rare Earth Elements ဆိုတာကတော့ Periodic Table မှာ အနီရောင်နဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ ဒြပ်စင်တွေ ကို ခေါ်တာပါဘဲ ၊ စုစုပေါင်း ၁၇ မျိုးရှိတယ် ၊ သဘာဝမှာတော့ ဒီ Elements တွေကို အခြားဒြပ်စင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီး အောက်ဆိုဒ်တွေ အဖြစ်နဲ့ တွေ့ရများတယ် စာတွေမှာတွေ့ရတဲ့ RE , REE ,REM စတာတွေဟာ ဒီရှားပါးသတ္တုတွေကို အတိုခေါ်ကြတာပါဘဲ!
Rare Earth တွေရဲ့အမည်တွေဟာလည်း စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောရရင် Yttrium , Ytterbium ဆိုတဲ့ elements တွေရဲ့ အမည်တွေဟာ ကို သူတို့ကို စပြီး တွေ့ခဲ့တဲ့ Ytterby ဆိုတဲ့ရွာကလေး အမည်ကို အစွဲပြုပြီးခေါ်ထားတာ Gadolinium ဆိုရင်လဲ ဒီလိုပါဘဲ သူ့ကို အရင်က Ytterby ရွာကလေးကတွေ့လို့ Ytterbite လို့ခေါ်ခဲ့ပြီးမှ နောက်ပိုင်းမှ သိပ္ပံ ပညာရှင်ကြီး Johan Gadolin ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ Gadolinium လို့ ပြောင်းခေါ်ခဲ့တာ ၊ Lanthanum ဆိုတဲ့ element ရဲ့ အမည်ကတော့ တစ်မျိုး ဖြစ်တယ် သူက ဂရိဘာသာစကား “lanthanein” ကနေလာတာ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Hidden လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတယ် ။ Lutetium ဆိုတဲ့ရှားပါး Elements ကတော့ သူ့ကိုစတင်တွေ့ရှိရတဲ့ Lutetia ဆိုတဲ့ မြို့ကို အစွဲပြုပြီးခေါ်တာ အဲဒီ Lutetia ဆိုတဲ့မြို့ဟာ ဒီနေ့ ကမ္ဘာကျော်ပဲရစ်မြို့ကြီးပေါ့ ။ကျန်တဲ့ elements တွေမှာလည်း ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ အမည်ဖြစ်ပေါ်လာပုံလေးတွေ ရှိသေးတယ် ။
Rare Earth ရဲ့အသုံးဝင်ပုံတွေကို ပြောရမယ်ဆိုရင် များလွန်းလို့ ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးထောင် ဆိုတာလို ဖြစ်နေမှာမို့ အကျဉ်းလောက် ပြောချင်တယ် … ၊ ဥပမာအနေနဲကပြောရရင် aerospace components လို့ခေါ်တဲ့ အာကသ သိပ္ပံဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ aluminium-scandium alloy လို့ခေါ်တဲ့ သတ္တုစပ်တစ်မျိုးရဘို့ Scandium ဆိုတဲ့ Rare Earth Elements ဟာ မရှိမဖြစ်လိုတယ် ၊အလားတူပဲ နေ့စဉ်အများပြည်သူသုံးပစ္စည်းတွေ ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပြူတာ memory တွေ ၊ Chip set တွေ ၊ DVD လေဆာ ပြားတွေ ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေ ၊ စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ Touch Screen တွေ LED TV တွေ နာမည်ကျော် ipad တို့လို Tablet တွေ ကင်မရာ LENS တွေ ကျန်းမာရေးကုထုံးတွေမှာ လိုတဲ့ လေဆာရောင်ခြည်ထုတ်လုပ်ရေးတွေ မှာ ဒီ Rare Earth Elements တွေဟာ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အဓိကလိုအပ်နေတယ် ။ Rare Earth Elements တွေမရှိရင် ဒါတွေမရှိတော့ဘူးပေါ့ ဒါဆိုရင် ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေရဲ့ လူမှုရေး ကျန်းမာရေး စီးပွားရေးတွေ အားလုံးကို ရိုက်ခတ်လာတော့မယ် ။
ဒါ့အပြင် Rare Earth Elements စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လက်နက်ထုတ်လုပ်ရေးတွေမှာလည်း မရှိမဖြစ်လိုနေတယ်Lanthanum ဟာ night-vision goggles လို့ခေါ်တဲ့ ညကြည့်မှန်ပြောင်းတွေ ၊ Neodymium လို့ခေါ်တဲ့ Rare Earth Elements ဟာ laser range-finders( လေဆာရောင်ခြည်သုံးပစ်မှတ်ရှာဖွေရေးစံနစ်), guidance systems (ဒုံးများကို ပစ်မှတ်ထိရောက်စေရန် လမ်းညွှန်ထိန်းချုပ်စံနစ် ), အခြားစစ်ဘက်သုံး အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းတွေ မှာ သူမပါရင် မဖြစ်တော့ဘူး ၊ အလားတူပဲ ပစ်မှတ်ကို အထူးတိတိကျကျ ထိရောက်အောင်ပစ်နိုင်တဲ့ precision-guided weapons တွေ အမေရိကန်တို့ရဲ့ နာမည်ကျော် ကိုယ်ပျောက်နည်းပညာ stealth technology တွေမှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့ “white noise” production တွေမှာ Samarium လို့ခေါ်တဲ့ Rare Earth Elements မပါရင် ဖြစ်ကိုမဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ကို ဒီ Rare Earth Elements တွေဟာ အရေးပါ အရာရောက်နေကြတယ် ။
Want to see Link: >>>what-are-rare-earth-elements(1)
ဂျပန်မြန်မာ ဆက်ဆံရေးနှင့် rare earth ခေါ် ရှားပါးသတ္တုများအကြောင်း
“အခု သမ္မတကြီးရဲ့ ဂျပန်ခရီးစဉ်ကတော့ဖြင့် နိုင်ငံအတွက် သတင်းကောင်းတွေ ဆက်တိုက်ကြားနေရတယ် ဆရာ ODA တွေပြန်ပေးမယ် ရန်ကုန်မြို့ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကိစ္စတွေ ဖြစ်တဲ့ ရေပေးဝေရေး ၊ရေဆိုးထုတ်ရေး ၊ လျှပ်စစ်ဖြန့်ဝေရေးတွေမှာ ဂျပန်က အကူညီတွေပေးမယ် ၊ ကြွေး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃.၇ ဘီလီယံကို လျော်ပေးမယ် ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် ၀န်ထမ်းတွေသင်တန်းပေးဘို့ ယန်း သန်း၂၀၀ ပေးမယ် ၊ အိုင်စီတီကဏ္ဍတွေမှာ နည်းပညာကူညီမယ် ၊ စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ် …စုံနေတာပါဘဲဆရာရယ်…တိုင်းပြည်အတွက် ၀မ်းသာစရာတွေ မဟုတ်လား ”
“ပြည်တွင်းပြည်ပ သတင်းတွေမှာလည်း ဒီလိုပဲဖေါ်ပြကြတယ် ဂျပန်က မြန်မာကို ကူညီတယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံအ ခုလိုအထောက်အပံ့တွေ ပြန်ပေး ကြွေးတွေလျော် လုပ်နေတာဟာ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလည်း တစ်ခုထဲကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး ဂျပန်က မြန်မာဆီက ပြန်ယူမယ့်ဟာတွေလည်း ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သိထားရမယ် မောင်ရင်တင်မဟုတ်ဘူး မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးလည်းသိထားသင့်တယ် ၊ သိအောင်လုပ်ပေးဘို့လဲ မီဒီယာတွေမှာတာဝန်ရှိတယ် ၊ ဒီလိုမဟုတ်ရင် ဂျပန်ကပေးတာတွေ ပဲဗမာက ရပြီး တို့ကဘာမှပြန်မပေးရဘူးလို့ ကမ္ဘာက အထင်ရောက်နေရင် တို့မြန်မာတွေဘက်က တစ်ပန်းရှုံးတာပေါ့ကွာ”….
ကမ္ဘာပေါ်မှာ rare earth လို့ခေါ်တဲ့ ရှားပါးသတ္တုတွေဟာ ဒီဘက်ခေတ်မှာ သိပ်ပြီး အသုံးဝင်လာတယ် ၊ ရှားပါးသတ္တုဆိုတဲ့အတိုင်း ရှားပါးလိုက်တာကလည်း မပြောနဲ့မောင်ရေ… အပုံတစ်သန်းမှာ ဒီရှားပါးသတ္တုလေးတွေ ၈၀ ပုံလောက်ပါရင်ကိုပဲ ၀မ်းသာနေရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကွ ၊ ဒီရှားပါးသတ္တုတွေကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ တရုတ်ပြည်က အများဆုံးထွက်တယ် ၊ ကမ္ဘာ့ ရှားပါးသတ္တု ဈေးကွက်ထဲက ၈၀%ကျော်ဟာ တရုတ်ပြည်က ထုတ်ရောင်းနေတာ ၊ ဒီလိုအခြေအနေကနေ မနှစ်ကတော့ တရုတ်ပြည်ဟာ သူ့ပြည်တွင်းလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေလို့ပါဆိုပြီးတော့ ဒီရှားပါးသတ္တုတွေ ပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကို ရပ်ဆိုင်းပစ်လိုက်တယ်၊ အရင်စာချုပ် လက်ကျန်လေးတွေ ဆက်ပို့ပြီးရင် ဒါ တင်ပို့မှုကို လုံးဝ ရပ်ပစ်လိုက်တော့မယ်လို့ ဆိုတယ် ”
“ဟာဒါဆိုရင် ကျန်တဲ့ လိုနေတဲ့နိုင်ငံတွေတော့ ဒုက္ခပေါ့နော် “
ဒါပေါ့မောင်ရင်ရာ… ဒီအထဲမှာ ဂျပန်နိုင်ငံဟာလည်း ထိပ်ဆုံးက ပါနေတာပေါ့ကွာ… ဂျပန်ဟာ ဒီရှားပါးသတ္တုမရရင် ပြဿနာတွေ အများကြီး ရှိတယ် ၊ ဆိုပါတော့ ipad တို့လို Tablet PC တွေ smart phone တွေ နောက်ပြီး ကွန်ပြူတာအစိတ်အပိုင်းတွေ နောက်ပြီး အာကာသဆိုင်ရာ ပစ္စည်းတွေ ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဒီ rare earth တွေဟာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ် ဒါမရှိရင် အဆင့်မြင့်မြင့်ထုတ်လို့ကိုမရဘူး ၊ ခုကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရဲ့ ၈၀ % ကျော်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ တရုတ်က မရောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ ဒီပစ္စည်းတွေ ထုတ်နေတဲ့ စက်ရုံတွေ ၊ နိုင်ငံတွေ ၊ ကုမ္မဏီတွေဟာ အတော်ကို ခေါင်းရှုပ်နေရတဲ့အဖြစ်မျိုးကိုရောက်နေတယ် ။
ကဲ! ဒီလောက်ဆိုရင် သဘောပေါ့ပြီပေါ့နော် ! ဂျပန်ဘာကြောင့် အကြွေးတွေလျှော်ပစ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းလဲ?
စကြားကြားချင်းကတော့ အတော့်ကို အားတက်စရာ သတင်းပါဘဲ… ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း အများနည်းတူ ကဒ်စံနစ်ဖြစ်ပြီပေါ့။ အဓိပတိအပြာလိုင်းမှာဘဲစမ်းသပ်တပ်ဆင်မယ်ဆိုတော့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိတယ်။ ဘာလို့ရှိသမျှ မ.ထ.သ လိုင်းအားလုံးတစ်ပြေးညီ မတပ်ဆင်တာလဲလို့….
ညက youtube က MRTV4 channel မှာ ကြည့်ရတော့မှ တော်တော်စိတ်ပျက်သွားတယ်။သူတို့လုပ်မယ့်စက်က ဒီလိုဟာမျိုးတဲ့ဗျာ..ဒီလို စက်မျိုးသာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကားစံပါယ်ယာတွေ တော်တော်ဒုက္ခရောက်မယ့်အမျိုး…ကဒ်ကို လုပ်နေတာနဲ့တင် မှတ်တိုင်တစ်ခုတစ်ခုကနေ ဘယ်လိုထွက်တော့မတုန်း.? အထူးသဖြင့် busy hour (ရုံးဆင်းရုံးတက်ချိန်မှာ)
ကဲ ကြည့်လိုက်ပါအုံး တော်တော်ကောင်းတဲ့နည်းပညာVideoလေး– ဟီးဟီး!
ဒါကSingapore က ဘတ်ခ်ကားကဒ်လေးပါ–
ဘတ်စကားပေါ်မှ အဆင်း အောက်နားရှိ အဖြူရောင်ပုံးငယ်မှာ အကြွေစေ့ထည့်စီးသူများ၏ လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းစွန့်ပစ်ရန်ပုံးဖြစ်သည်။
နတ်ပိုက်ဆံဟု ထူးထူးဆန်းဆန်း အမည်မှည့်ခေါ်ထားသော iPay ကဒ်ဖတ်စက်။ ကျသင့်သည့်ပမာဏကို စက်တွင်ပုံပါအတိုင်းရိုက်ထည့်ပြီး၊ စက်ညာဖက်မှ မြောင်းတွင် ကဒ်၏ magnet line အားပွတ်ဆွဲ၍ ကျသင့်ငွေအားနှုတ်သောစံနစ်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ဈေးဝယ်သည့်နေရာ၊ တက္ကစီခရှင်းသည့်နေရာတို့တွင်သုံးသည်။
ဘတ်စကားခပေးကဒ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးမှ မဟုတ်ပဲဗျာ…. အခုဟာက ဈေးဝယ်ကဒ်လိုမျိုးကဒ် ။ မနက်၊ညနေ busy hour မှာဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? မ.ထ.သ နဲ့ ဦးပိုင်က ပုဂိုလ်တွေ တကယ်ဘဲ မသိတာလား…သိလျက်သားနဲ့ ခွင်ရိုက်တာဘဲလား…. ဒါမှမဟုတ် နားမလည်ပါးမလည် ခွင်ထဲဝင်လာတဲ့ သူကို ရိုက်စားလုပ်တာလား…မေးခွန်းတွေ တသီတတန်းနဲ့ ဒီပို့စ်ကို မနေနိုင် မထိုင်နိုင် တင်လိုက်ပါတယ်။ ထိုဂွင်ထဲမှာ ပါဝင်ပါတ်သက်နေသော လူကြီးမင်းအပေါင်း..ကျနော့်အား စိတ်ရှိလက်ရှိမုန်းကြပါကုန်….
ဘတ်(စ)ကားပေါ်ကို လူတက်တာနဲ့ ကဒ်ကို ပုံပါအတိုင်း စက်တွင်ကပ်လိုက်ရသည်။ ထိုအခါ စက်ကလက်ရှိတည်နေရာကိုမှတ်သားသည်။ LCD မော်နီတာအောက်တွင် အချက်ပြမီး (၃)ခုရှိသည်။
သင်၏ကဒ်တွင် ပိုက်ဆံလက်ကျန်နည်းနေပါက အ၀ါရောင်မီးပြကာ မြည်သံ(၃)ချက်ပေးသည်။ မော်နီတာပေါ်တွင်လည်း Top up your card (ငွေထပ်ဖြည့်ပါ) ဟု စာသားပေါ်မည်။
သင်၏ကဒ်တွင်ရှိသော ပိုက်ဆံသည် ယခုသင်စတက်သောနေရာမှ ခရီးစဉ်အဆုံးထိ စီးနင်းရန်မလုံလောက်လျှင် မီးနီလင်းကာ အချက်ပေးသံ(၅)ချက် ထပ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ယာဉ်မောင်းမှ သင့်အား ငွေမလုံလောက်ကြောင်း၊ ပိုက်ဆံပေးစီးရန် အကြံပြုလိမ့်မည်။ သွားမည့်ခရီးကို ယာဉ်မောင်း(Bus Captain) အားပြောပါ။ ကျသင့်ငွေကို တွက်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုအခါ ကျသင့်ငွေကို အကြွေစေ့ထည့်စက်သို့ထည့်ပါ။ သင့်အား စလစ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ထိုလက်မှတ်ခဖြတ်ပိုင်းအား ကားပေါ်မှ မဆင်းမချင်း ထိန်းသိမ်းထားပါ။ လက်မှတ်စစ်တက်လာလျှင် ထိုဖြတ်ပိုင်းအားပြပါ။
ကားပေါ်မှဆင်းသည့်အခါ အဆင်းပေါက်(နောက်ဘက်အပေါက်)တွင် ကဒ်အားစက်တွင် ကပ်ရပါမည်။ ထိုအခါ စက်မှ ကျသင့်ငွေအား နှုတ်ပြီး မော်နီတာပေါ်တွင် လက်ကျန်ပမာဏအား ပြသပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်းတွင်ကဒ်ရိုက်ရန်မေ့လျှင် သိပ်ပြဿနာ မရှိပါ။ ခရီးစဉ်အဆုံးမှတ်တိုင်အထိတွက်ပြီး ငွေဖြတ်ပါလိမ့်မည်။
ထိုကဒ်အား ဘတ်(စ)ကားခ ပေးရာတွင်သုံးနိုင်သလို ရထားခပေးရာတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။ စင်္ကာပူ ဟောင်ကောင်တို့တွင် ဘတ်(စ)ကား နှင့် ရထားမှာ operator (ကိုင်တွယ်စီမံခန့်ခွဲသူ) တစ်ဦးတည်းဖြစ်ရာ ရထားနှင့်ကားကို ဆက်တိုက်ပြောင်း၍ စီးသွားလျှင် ကနဦးကျသင့်ငွေကို စုစုပေါင်းတွင်ပြန်နှုတ်ပေးပါသည်။ ကိုရီးယားတွင်လည်းထို့အတူပင်ဟု သိရပါသည်။
ယခုအခါ ထိုကဒ်ကိုပင် အလိုအလျောက်အခပေး ကားပါကင်များတွင်လည်းကောင်း၊ ERP (electronic road payment) ဟုခေါ်သော ကားကျပ်သည့်နေရာများတွင် လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်စံနစ် တွင်လည်းကောင်း ၊ ကုန်တိုက်ကြီးများရှိ ကင်တန်း များတွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ERP (လမ်းအသုံးပြုခကောက်ခံသည့်စက်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဘတ်စကားကဒ်၊ ထိုစက်၊ထိုကဒ်ဖြင့် အလိုအလျောက် ကားခပေး ပါကင်များတွင်လည်း သုံးနိုင်ပါသည်။
ထိုကဒ်အား အထက်ဖော်ပြပါ ရထားဆိပ် ၊ ကားဂိတ်များရှိ top-up kiorsk များတွင်လည်းကောင်း၊ ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုဌာနများ၊ မြို့တော်တွင်းနေရာအနှံ့တွင်ရှိသော 7-11 stores များ၊ ATM ငွေထုတ်စက်များ၊ smart phone များမှသော်လည်းကောင်း၊ ငွေပြန်လည် ဖြည့်တင်းနိုင်ပါသည်။ Online မှဖြည့်တင်း၍ ရသည်ဟုလည်း ဆိုပါသည်။( ကျနော်တော့ မလုပ်ဘူးပါ။)
အစာအိမ်ရောဂါသတိထားပါ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည့်အဆင့်အမှတ်(၁)အဖြစ် WHO က သတ်မှတ်ထား